हेडलाइन – Letang Khabar
लेटाङ २३ चैत । नमुना सामुदायकि बन उपभोक्ता समुह लेटाङ ३ ले लेटाङ नगरपालिकाले स्थापना गरेको नगर स्तरिय राहत कोषमा १ लाख १४ हजार ७ सय ११ रुपैया रकम जम्मा गरेको छ । उक्त सामुदायिक बनका अध्यक्ष गोपाल चौलागाँईले आज लेटाङ नगरपालिकाका प्रमुख शंकर राईलाई चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो । विश्वभरी कोभिड १९ को महामारी फैलिरहेको […]
लेटाङ, २२ चैत । नेपाल सरकारको नियमलाई पालना गर्दै राहत कार्यक्रमलाई एकद्धार प्रणाली वाट बाड्नु पर्नेमा आफु खुसि, प्रसासन तथा वडा कार्यालयलाई कुनै जानकारी नदिई केही ब्यक्तिहरु बस्तिमा पसेर स्वास्थ्य सम्बेदनशिलतालाई समेत ख्याल नगरी राहत वितरणकाे नाममा गरिएकाे क्रियाकलापको लेटाङ नगरपालिका वडा नं. ८ ले विज्ञप्ती मार्फत भत्र्सना गरेको छ । आज वडा अध्यक्ष भिम […]
प्रशान्त निरौला लेटाङ, २० चैत । लेटाङ नगरपालिले आफ्नो क्षेत्रभित्रका गरिव, विपन्न तथा श्रमिक व्यक्तिहरुमा नोवेल कोरोना भाईरस (कोभिड १९ )को कारणले खाद्यान्नको अभाव भई भोकमरी आउन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरि लेटाङ नगरपालिकाले वनाएको मापदन्डका आधारमा खाध्यान्न उपलव्ध गराउने भएको छ । नगरपालिकाले ४ जना सम्मको परिवारलाई डिटोल सावुन १, चामल १२ के.जि., दाल १ […]
कोरोनाकाे शंका लागेकालाई पनि अस्पताल पूर्याउछौ: एम्बुलेन्स चालक
लेटाङ , १६ चैत । एम्बुलेन्स वाट अस्पताल जान चहाने नोवेल कोरोना लगायत सवै किसिमका समस्या भएका विरामीहरुलाई बोक्न आफुहरु तयारी अवस्थामा रहेको लेटाङका एम्बुलेन्स सञ्चालकहरुले बताएका छन् । कोरोना भाईरसको महामारीको समेत प्रवाहा नगरी आफुहरु विरामीहरुलाई अस्पताल पूर्याउन तयार रहेको उनिहरुले वताएका हुन् । मोरङ साकोसका सन्तोष अधिकारीले हामी संग कुरा गर्दै समस्या देखिए […]
जनसेवाको १८ औ बार्षिक साधारण सभा
लेटाङ २९ अशोज । प्रदेश नं. १ मै यसवर्षको उत्कृष्ठ सामुदायिक बन हुन सफल जनसेवा सामुदायिक बन उपभोक्ता समुह लेटाङ ४ को १८ औ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । आज सोही सामुदायिक वनको सभाहलमा भएको कार्यक्रममा लेटाङ नगरपालिकाका प्रमुख शंकर राईको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । कार्यक्रममा संस्थाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा आर्थिक […]
लेटाङ ३१ असार । लेटाङ नगरपालिकाको ५ औ नगरसभाले ५० करोड ८६ लाख ५७ हजार रुपैयाँको बजेट पास गरेको छ । नगरप्रमुख शंकर राईको अध्यक्षता वसेको नगरसभाको खुल्ला सत्रमा प्रस्तुत गरिएको वजेटलाई बन्दसत्रमा बहुमतले पारित गरेको हो । नगरसभाले चालु खर्च अठ्ठाईस करोड त्रिहत्तर लाख बहत्तर हजार पाँचसय र पूँजिगत खर्च बाईस करोड बाह्र लाख […]
लेटाङ नगरपालिकाको वजेट ५० करोड
प्रशान्त निरौला लेटाङ १० असार । लेटाङ नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ५० करोड ५७ लाख रुपैयाको अनुमानित आयव्यय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाको ५ औ नगरसभामा उपमेयर कृष्णकुमारी निरौलाले ५० करोड माथिको वजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । प्रस्तुत गरिएको वजेट अनुसार आन्तरिक राजश्व १ करोड ६० लाख प्राप्त हुने वताईएको छ […]
लेटाङ २४ चैत । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला कार्यसमिति मोरङले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । शनिवार मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा सम्पन्न भएको फेकेफोन मोरङको अधिबेशन बाट रामकृष्ण राईको अध्यक्षतामा २० सदस्य नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । संघको उपाध्यक्षमा लेटाङकी शुभद्रा भट्टराई , सचिव वालकुमारी कट्टेल , कोषाध्यक्ष विद्या चापागाँई चयन हुनुभएको छ । प्रमुख […]